Ingxaki yomsindo nge-default Boeing 747 (FSX)
umbuzo Ingxaki yomsindo nge-default Boeing 747 (FSX)
iinyanga 1 kunyaka 7 eyadlulayo #692 by abantu
Xa ndibhabha nantoni na i-fsx i-Boeing 747 Andikwazi ukufumana isandi (iinjini, ukulawula, ...).
Ndazama ukuqala kwakhona yonke into nokulungisa i-FSX ngeCD-ROM kodwa akukho nto inceda.
Ngaba umntu uyazi indlela yokulungisa oku?
iinyanga 4 4 kwiiveki ezidlulileyo #1209 by FlankerAtRicoo
Xa nayiphi na iindiza zinika izandi ezichanekileyo ndicinga ukuba iifayile zomsindo ze-747 zikhohlakele okanye isandi sakho.cfg silahlekile okanye singenanto kwi-Sounds Sounds kwifayile ye747 ....
Khangela kwakhona ukuba awuzange uthinte ngokungathandabuzekiyo oguqula isandi kwi-FSX.
Unokuzama ukulanda ipakethe yomsindo wesithathu (kukho ezininzi ezininzi) kwaye ubone ukuba uyabathanda ...
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: abantu
Ixesha ukwenza page: 0.227 imizuzwana